Ejimajima Digital - Nkà ihe ọmụma maka mgbanwe ọgbara ọhụrụ ọhụrụ - Geofumadas
Ejimajima Digital - Nkà ihe ọmụma maka mgbanwe ọgbara ọhụrụ
Febụwarị, 2020 innovations
Ọkara nke ndị na-agụ isiokwu a ka ejiri nkà na ụzụ mụta ha, ndị maara mgbanwe dijitalụ dị ka eziokwu. N’ime ọkara nke ọzọ anyị bụ ndị gbara akaebe n’afọ kọmputa dị na-abịa n’enyeghị ikike; na-emechi ọnụ ụzọ ma gbanwee ihe anyị mere ka ọ bụrụ akwụkwọ, akwụkwọ ma ọ bụ ọdụ kọmputa nke nwere ike ịza azịza ndekọ mkpụrụ edemede na eserese. Ihe sọftụwọs BIM lekwasịrị anya ugbu a, na ezigbo ọrụ, nke ejikọtara ya na ọnọdụ gbara gburugburu, na-aza usoro agbakwunyere n'ahịa azụmaahịa na ntanetị ndị sitere na ekwentị mkpanaaka, bụ ihe akaebe nke ebe onyinye ụlọ ọrụ ahụ siri nwee ike ịkọwa Onye choro
Termsfọdụ usoro okwu gara aga dijitalụ gara aga
PC - CAD - PLM - Ntaneti - GIS - email - Wiki - http - GPS
Ntughari obula nwere ihe ndi ozo, ndi gbasoro ihe nlere gbanwere uzo di iche PC ahụ bụ artifact gbanwere njikwa akwụkwọ anụ ahụ, CAD zigara tebụl ịbịaru teepu ahụ na puku ọla mmiri na-adabaghị na ndị na-ese ya, email ahụ ghọrọ usoro ndabere nke dijitalụ iji kparịta ụka n'usoro; ha nile jedebere n'iso iwu dika nnabata nke uwa; opekata mpe site n’echiche nke onye na-eweta ya. Mgbanwe ndị ahụ maka mgbanwe dijitalụ gara aga lekwasịrị anya na itinye uru na ozi ala na mkpụrụedemede, nke na-akwalite ọtụtụ azụmaahịa taa. Ihe atụ nke usoro mgbanwe ndị a siri bịa bụ njikọta ụwa; ya bu, nghazi nke http anyi n’enweghi ike wepu anyi taa. Atụmatụ ọhụrụ ahụ jiri ozi ahụ, ọnọdụ nke njikọta wee gbanwee ha ka ha bụrụ omenala ọhụrụ anyị na-ahụ taa dịka Uber, Airbnb, Udemy, Netflix.
Mana taa, anyị nọ n'ọnụ ụzọ maka mgbanwe ọhụụ nke dijitalụ, nke ga-emebi ihe a niile.
Mbelata Mgbu - 4iR - IoT - Digital Ejimajikọ - Nnukwu Data - AI - VR
Ọ bụ ezie na okwu ọhụrụ na-egosi na ọ bụ nanị achonyms nke ejiji hashtag, anyị enweghị ike ịgọnarị na mgbanwe nke anọ nke ụlọ ọrụ dị n'ọnụ ụzọ, na-agbanye iche na ọtụtụ ọzụzụ. Internetntanetị nke ememe a na-ekwe nkwa ịba ụba karịa; na-eji ihe ọ bụla enwetara ruo ugbu a, mana na-etisasị paradaịs ndị na-abụghị ahịa na-agaghị ejikọ naanị kọmputa na mobi; O na ejikota ihe mmadu mere na onodu ha.
Onweghi otu okwu nke puru ime ihe ngosi banyere ihe omuma ohuru ga - adi, n’agbanyeghi olu ndi isi ulo oru isi na - egosi anyi ike, ma oburu na anyi n’eche echiche ma mata ntozu oke. Visfọdụ ọhụụ, ụdị ya na ohere nke mgbanwe ọhụụ a, nwere ezigbo ohere nke ndị na-atụ anya ịre ahịa taa. Ndi ochichi, n’uju nke ndi isi ha, na-ahuta ihe ahia ma obu imeghari ndi ozo n’onodu ha puru igosi n’oge obere oge, ma n’ikpeazu ndi oru ndi n’enwe obi uto, n’ahu ndi choro ndi nwere ihe ohuru. okwu.
Ma n’agbanyeghi na onodu ohuru a na-ekwe nkwa iwu kacha mma nke idi n’udo, koodu n’ebughi oke na onye nwere onwe ya, ikwado gburugburu ebe obibi, ihe nile a na-enweta site na nkwekorita; O nweghị onye kwere gị nkwa na ndị na-eme ihe nkiri dịka gọọmentị na agụmakwụkwọ ga-ebi ndụ ha mgbe oge ruru. Mba ọnweghị onye ga - ekwu ihe ọ ga - abụ; Anyị maara ihe ga-eme.
Ejimajima Digital - TCP / IP ọhụụ?
Ma dị ka anyị maara na ọ ga-eme n'ụzọ nke na anyị enweghị ike ịghọta mgbanwe ndị a na-aga n'ihu, ọ ga-adị mkpa ijikere maka mgbanwe a. Anyị maara na n'oge a, ịdị nkọ na nkwekọrịta agaghị aga n'ihu maka ndị ghọtara nrịba ahịa nke ụwa jikọtara ọnụ na ebe uru agbakwunyere ọ bụghị naanị na egosi na ahịa ngwaahịa, kamakwa na nzaghachi nke ndị ahịa na-enwewanye ike. n'ịdị mma nke ọrụ. Obi abụọ adịghị ya, ụkpụrụ ahụ ga-arụ ọrụ ha kachasị mma iji hụ na nguzozi dị n'etiti ike ịmepụta ụlọ ọrụ na ihe ndị ọrụ njedebe.
Digital Twin na-achọ itinye onwe ya na nkà ihe ọmụma nke mgbanwe dijitalụ ọhụrụ a.
Gịnị ka usoro ọhụụ ahụ na-achọ?
Maka http / TCIP ka ọ bụrụ ọkọlọtọ nkwukọrịta nkwukọrịta, nke dị taa ka dịrị n’ihu mmalite nke teknụzụ na ọha mmadụ, ọ gharịrị n’usoro ọchịchị, mmelite na ọchịchị onye kwuo uche ya na ọchịchị aka ike nke onye ọrụ ahụ. amaghi ama. N'akụkụ a, onye ọrụ ahụ amabeghị adreesị IP, ọ dịkwaghị mkpa iji pịnye www, onye na-achọ ihe dochie mkpa ọ dị pịnye http. Agbanyeghị, na ajụjụ ụlọ ọrụ ahụ na-ajụ gbasara ike ndị agadi n'azụ ọkọlọtọ a, ọ ka bụ dike nke mebiri usoro nkwukọrịta ụwa niile.
Mana oru ohuru a kariri ijikọ kọmputa na ekwenti. Ọrụ igwe ojii dị ugbu a, kama ịchekwa ibe na data, bụ akụkụ nke ọrụ nke ndụ nwa amaala, gọọmentị na azụmaahịa. Ọ bụ naanị otu n'ime ihe kpatara ọnwụ nke usoro mbụ ahụ, dabere na adreesị IP, ebe ọ dị ugbu a dị mkpa ijikọ ihe osise sitere na igwe na-asa ahụ nke chọrọ iziga ozi nke mechara mechaa uwe ndị ahụ, na ndị nwetere nke àkwà mmiri. Oge nlere kwesịrị ime ka ị mata ọkwa ike ọgwụgwụ gị na mkpa maka mmezi. Nke a bụ, n'ụdị amaghị, nke ihe anyị na-akpọ ịntanetị nke ihe; nke ogbugba ndu ohuru aghagh ikwu.
Usoro ohuru a, ma oburu n’acho ibu agha, aghaghi ikwenye karia ihe omuma. Dịka obosara, ọ kwesịrị ịgụnye gburugburu ebe niile dị ugbua na nke ọhụrụ, yana ntinye na gburugburu ebe obibi na ọrụ enyere na mmekọrịta mmadụ na ibe, akụ na ụba na gburugburu ebe obibi.
Site na usoro ụlọ ọrụ, ụkpụrụ ọhụrụ ahụ ga-enwerịrị onye nnọchi anya dijitalụ nke ihe anụ ahụ; dị ka onye na-ebi akwụkwọ, ụlọ, ụlọ, àkwà mmiri. Mana karia ihe omuma ya, a na-atụ anya itinye uru na arụmọrụ; nke mere na ọ na-enye ohere ime mkpebi ndị amachaghị nke ọma, yabụ na-arụpụta ezigbo nsonaazụ.
Site n'echiche nke mba, protocol ọhụrụ ahụ kwesịrị inwe ike ịmepụta gburugburu obibi nke ọtụtụ ụdị ejikọtara; dị ka akụ niile nke obodo, iji tọhapụ karịa uru site na iji data ahụ maka ọdịmma ọha.
Site na uzo esi emeputa ihe, odi nkpa ka akwukwo ohuru nwee ike idozi usoro ndu; mee ka ọ dị mfe n’ihe na-eme ihe niile, ihe dị ka okporo ụzọ, ala, ụgbọ; ammatrials dika ire ahia ahia, atumatu atumatu, esere ese. Standardkpụrụ ọhụụ kwesịrị ime ka amụọ ha niile, amụba, rụpụta nsonaazụ, ma nwụọ… ma ọ bụ gbanwee.
Inmụ ejima dijitalụ na-achọ ịbụ usoro ọhụrụ ahụ.
Kedu ihe nwa amaala na-atụ anya maka mgbanwe ọhụụ Digital.
Ihe nlere kachasi nma banyere otu osi adi na onodu ohuru a, abughi iche banyere ihe Hollywood kwuputara anyi, nke ndi bi n’ime dome nke ndi amuru n’achi n’achi n’agha n’achi oru ndi lanariri ala-mgbe ajuputara ya ebe odighi ya kari ichoputa ihe emeghari emeghe. nke ekere uwa maka otutu; ma ọ bụ na n'akụkụ nke ọzọ, ọnọdụ echiche efu ebe ihe niile zuru oke nke na mmetụta nke ịzụ ahịa ụmụ mmadụ lara furu efu.
Mana ihe aghaghi iche maka ọdịnihu; Ọbụlagodi maka edemede a.
Ọ bụrụ na anyị hụrụ ya n'ọchịchọ nke ndị ọrụ ukwu abụọ dị na atụmatụ ụlọ ọrụ n'ihu ụlọ onye anyị ga-akpọ ndị nwere mmasị. Ndi otu nwere mmasi nke kwesiri igwa ya nke oma ime mkpebi ndi ka nma, ya na nwa amaala nke choro ka oru ya karie ka odi ya nma; icheta na ndi otu nwere mmasi nwere ike ịbụ nwa amaala n’otu n’otu ma ọ bụ n’otu nọ na-eme ihe sitere n’ihu ọha, nke onwe ma ọ bụ nke arụkọ ọrụ.
Ya mere anyị na-ekwu maka ọrụ; Abụ m Golgi Alvarez, ọ dịkwa m mkpa iwu ịgbakwunye na ala nke atọ nke ụlọ m; nke nna m wuru na 1988. Maka ugbu a, ka anyị chefuo usoro, akara ma ọ bụ acronyms na-eme ka ọnọdụ a bụrụ ihe ruru unyi ma mee ka anyị dabere onwe anyị na ndị dị mfe.
Juan Medina nwere ikike na a nabatara arịrịọ a n'oge dị mkpirikpi, na ọnụ ala dị ala, yana nghọta kacha ukwuu, traceability yana obere ntakịrị ihe ndị chọrọ.
Ndi nwe obodo kwesiri inwe ihe omuma zuru ezu iji kwado mkpebi a na ntukwasi obi, ya mere na a choputara onye, ​​kedu, mgbe na ebe o n’ego ntinye akwụkwọ a: n’ihi na ozugbo o kpebiri mkpebi a, o ghaghi n’enwe onodu ikpe azu nke mgbanwe a mere. , na otu traceability o nyere. Nke a na-anabata echiche ahụ «Njikọ nke akụrụngwa nwere ọgụgụ isi, ụzọ eji arụ ọgbara ọhụrụ na akụnụba dijitalụ na-eweta ohere na-abawanye ugbu a iji melite ogo ndụ ụmụ amaala".
Uru uru data bara na ọnọdụ a, gafere n’inwe otu usoro ihe omume zuru oke gbasara ụwa niile; kama, anyị na-ekwu maka inwe ụdị nke ejikọtara dị ka ebumnuche nke ọgbụgba-ndụ nke ọrụ:
Nwa amaala na ihe ya chọrọ bụ azịza (usoro),
onye nyere ikike ichoro iwu (geospatial zoning),
onye mmebe nzaghachi imebe ihe (Model BIM ịbụ),
onye na-ewu ihe na-aza nsonaazụ (atụmatụ, mmefu ego, atụmatụ),
na ndị na-eweta ihe na ntinye aha (nkọwapụta),
onye nlekọta nke na-aza nsonaazụ ikpeazụ (BIM dị ka usoro e wuru).
O doro anya na ịnwe ụdị nke ejikọtara ọnụ ga-eme ka ihe ndị na-etiti ahụ dị mfe, na-enwe ike ịmegharị ihe nkwado na n'ọnọdụ kachasị mma bụ ọrụ onwe onye nke onye ọrụ njedebe; ma ọ bụ opekata mpe, transperent na traceable, belatara na usoro pere mpe. Na njedebe, ihe nwa amaala chọrọ bụ ka o nye ikike ma wuo; ebe gọọmentị kwadoro dịka iwu ya siri dị ma nweta ozi gbasara steeti ikpeazụ. Yabụ, njikọ dị n'etiti ụdị ọfịs ndị dị n'ihu bụ naanị isi ihe atọ a, nke na-agbakwunye uru.
Onye nwe ya rụrụ ọrụ ahụ ọ tụrụ anya, Gọọmentị mesiri ya ike na arụchara ọrụ ahụ na nnabata usoro iwu na-enweghị nnukwu mbọ siri ike ime ka ozi ya dị ọhụrụ. Ihe iche bu na ebumnuche.
Ọ bụ ezie na maka onye na-emezu ihe ahụ, onye na-ese ihe na onye na-eweta ya, ihe mgbakwunye ahụ bụ akụkụ ndị ọzọ; kama n’otu ụzọ ahụ mmekọrịta ndị ahụ kwesịrị ịdị mfe.
Y’oburu na anyi huru ya site n’ile ihe omuma, ngwa a nke anyi mebere n’ulo nwere ike itule maka udiri usoro a: ire ahia, igba ego, ngwa inye ego, ikikere ahia, irigoro ihe ndi ozo, ma obu imeghari ya. nke atụmatụ ime obodo. Ihe di iche di na uzo dika uzo na uzo ha si bia; mana ọ bụrụ na ha nwere otu ngalaba ngalaba ahụ, ha kwesịrị inwe ike ịgakọrịta.
Twins Digital, na-achọ ịbụ ihe nlere nke na-enye aka ịhazi ma jikọọ ihe nnọchi anya, na-enwe oghere dị iche iche, obere oge na ụzọ dị nso.
Kedu ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya na ụkpụrụ Gemini.
Ihe atụ gara aga bụ ikpe dị mfe na njikwa n'etiti nwa amaala na ikike; mana dị ka a hụrụ na paragraf ikpeazụ, ọ dị mkpa na ụdị dị iche iche jikọtara ọnụ; ma ọ bụghị ya, a ga-akwụsị ụdọ ahụ na njikọ na-esighi ike. Ka nke a wee mee, ọ dị mkpa na mgbanwe dijitalụ ahụ gụnyere gburugburu ebe obibi dum a na-ewu, ka ejiri wee rụọ ọrụ, arụmọrụ, mmezi, atụmatụ na ịnye akụ nke obodo na nke obodo, usoro na ọrụ. Ọ gha eweta uru maka obodo niile, akụ na ụba, azụmahịa yana gburugburu ya.
Maka ugbu a, ihe atụ kachasị mma bụ nke United Kingdom. Site na ntinye ya nke Obodo isi Gemini na maapụ okporo ụzọ ya; mana tupu anyị akpọ ndị enyi ka ha megide ebili mmiri ahụ na omume ha akụkọ ihe mere eme nke ịchọ mgbe niile ịme ihe niile n'ụzọ dị iche ma n'usoro n'usoro. Ruo taa, standardskpụrụ Britain (BS) enweela mmetụta dị elu na ọkọlọtọ nke mba ụwa; ebe ọrụ nke atụmatụ ugbu a dịka i3P, ICG, DTTG, UK BIM Alliance bụ ihe a na-akwanyere ùgwù.
Na nsonaazụ pụrụ iche nke United Kingdom, ihe juru anyị anya bụ ihe Digital Framework Working Group (DFTG) na-ewepụta, nke na-ewekọta isi okwu sitere na gọọmentị, agụmakwụkwọ na ụlọ ọrụ iji wee nwee nkwekọrịta na nkọwapụta na ụkpụrụ dị mkpa. Ntuziaka dị mkpa iji bulie mgbanwe dijitalụ.
Site na onye isi oche na-elekọta Mark Enzer, DFTG edebanyela aka na-atọ ụtọ maka ịmepụta Mbido ahụ nke na-enye njikwa ozi dị mma na gburugburu ebe a na-ewu ụlọ, gụnyere mgbanwe data. Ọrụ a, rue taa, nwere akwụkwọ abụọ:
Ihe ndị a bụ ndu maka ụkpụrụ “nnabata” nke njikwa njikwa ihe ọmụma, nke gunyere ụkpụrụ 9 nke ijikọtara ụzọ 3 dịka ndị a:
Ebumnuche: Ọdịmma ọha, Ọdịmma bara uru, Ọhụụ.
Ntụkwasị Obi: Nchebe, Emeghe, Ogo.
Ọrụ: Federation, Agwọ, Evolution.
Roadzọ Okporo ụzọ.
Nke a bụ atụmatụ e mepụtara ka o nwee ike ịzụlite usoro njikwa ozi, yana iyi 5 na-edebe ndị isi Gemini n'ụzọ.
Nke ọ bụla n'ime okwute ndị a nwere ụzọ dị oke mkpa ha nwere, ha na-eme ọtụtụ ihe, ma ha nwere otu olu; dika egosiri na eserese. Ogba ndị a:
Bịa, yana ọrụ 8 dị oke mkpa na ọrụ abụọ na-adịghị oke mkpa. Isi dị ka nkọwa ya dị mkpa iji mee ka ndị na-eme ihe ike.
Ndi ochichi, yana ọrụ dị oke mkpa 5 yana ọrụ 2 na-adịghị oke mkpa. Ọ bụ nke ugbu a nwere obere ịdabere.
Ihe jikọrọ, na arụ ọrụ 6 dị oke mkpa na ọrụ 7 na-adịghị mkpa, ọ bụ nke kachasị.
Ngwa, na ọrụ 4 dị oke mkpa na ọrụ 6 na-adịghị oke mkpa, yana ọtụtụ mmekọrịta na njikwa mgbanwe.
Gbanwee, 7 ọrụ dị oke mkpa na 1 na-enweghị nkatọ. Ọ bụ nke ugbu a nke ụzọ ya dị oke mkpa bụ usoro dị nkọ.
Dịka ị nwere ike mata ebe a, ị bụghị na-eche naanị maka United Kingdom dịka Brexit nke mgbanwe mgbanwe dijitalụ, ma ọ bụ ụtọ gị maka ịnya n'okporo ụzọ aka ekpe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkwalite ihe ejikọtara ejima dijitalụ nke nwere njiri obodo, ọ dị mkpa ịkọwapụta ihe nwere ike ịhazi ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị n'ụkpụrụ. Ihe ndị a na-apụta iche na nke a:
1.5 Itinye aka na atụmatụ ndị ọzọ.
Acronyms nke ihe a di otutu karie, ịkwanyere nzọ a ugwu; ISkpụrụ ISO, ụkpụrụ European (CEN), itinye aka na Innovate UK, Owuwu ụlọ SMART, W3C, BIM UK, DCMS, i3P, DTTG, IETF.
4.3 Nweta mba nile.
N'ebe a, anyị na-ekwu maka ịchọpụta na ijikwa ọnụ ụzọ ụlọ nwere mmemme, atụmatụ na ohere dị na ọnọdụ ụwa na synergies. Na-akpali, na ha nwere na ha na elele mmụta nke ezi omume nke mba ndị na-agbalị; tinyere ohere nke ijikọ ọnụ ọgụgụ ndị na-ahụ maka mgbanwe mba ụwa, gụnyere Australia, New Zealand, Singapore na Canada.
Akwụkwọ nke nwanyi akpọrọ Gemini Princized, iji mezuo nkwekọrịta n'etiti ndị isi ụlọ ọrụ bụ isi, ga-abụ ihe «Cadastre 2014» na njedebe nke 2012s, nke guzobere akụkụ phylophic maka nchịkwa ala, nke mechara mee Nkwenye na-arụ ọrụ na ebido dịka INSPIRE, LandXML, ILS na OGC, ghọrọ nke afọ 19152 ọkọlọtọ ISO-XNUMX, nke a maara taa dịka LADM.
N'okwu a, ọ ga-abụ ihe ịtụnanya ịhụ etu ndị isi siri ike na ụlọ ọrụ teknụzụ ndị wetaara ụdị nke ha si nwee nkwekọrịta; N'echiche m, ha bụ isi:
Ndị otu SIEMENS - Bentley - Microsoft - Topcon, nke na-eme n'ụzọ zuru ezu imezu usoro okirikiri Geo-Injinia; ijide, nnomi, mmebe, arụmọrụ na njikọta.
Ndi otu HEXAGON - nke nwere otutu ezigbo uzo ihe ndoro-ndoro nke nwere udiri ihe na-adọrọ mmasị na Pọtụfoliyo nke kewara na ọrụ ugbo, akụ, ụgbọ elu, nchekwa, nchekwa na ọgụgụ isi, Ngwuputa, njem na gọọmentị.
Otu Trimble - nke na-ejigide ihe kwekọrọ na abụọ gara aga, yana ọtụtụ uru ọkwá na njikọta na ndị ọzọ, dịka ESRI.
Otu AutoDesk - ESRI na na mbọ a na-eme n’oge na-adịbeghị anya chọọ ịgbakwunye Pọtụfoliyo nke ahịa ebe ha bụ nke ha kacha.
Ndị ọzọkwa na-eme ihe nkiri, ndị nwere ebumnuche ha, ụdị na ahịa ha; ya na ndi choro ime ka ihe ha choro na ndi mmadu kwenye. Ihe atụ, General Electric, Amazon ma ọ bụ IRS.
Yabụ, dị ka mgbe nna m kpọgara m rodeo iji hụ ka ụmụ ehi si achị ehi, site na pen anyị, anyị ga-ahụ ihe anyị na-ahụ. Mana ọ ga-abụ nnukwu asọmpi, ebe nke na-enweta nkwekọrịta buru ibu, ebe ịnweta mmekorita na-agbakwunye uru karịa ọnụ ahịa ngwaahịa ahịa.
Ọrụ nke BIM dị ka Twins Digital
BIM enweela mmetụta dị elu ma na-aga n’ihu n’oge dị mkpa, ọ bụghị n’ihi na ọ na-eme ka njikwa dijitalụ nke ụdị 3D, kama n’ihi na ọ bụ usoro nke ndị isi ndu nka, injinịa na ụlọ ọrụ na-ewu.
Ọzọ, onye ọrụ nke njedebe amaghị banyere ọtụtụ ihe na-eme na azụ ụlọ nke ụkpụrụ ahụ; dị ka onye ọrụ ArchiCAD nke nwere ike ikwu na ọ meelarị ya tupu a kpọọ ya BIM; eziokwu dị obere, mana akacha dị ka usoro dị na ọkwa 2 na nke 3 gafere karịa ijikwa ozi enwere ike ịgbanwe agbanwe, yana ebumnuche nke ijikwa ọrụ na usoro ndụ ọ bụghị naanị nke akụrụngwa kamakwa ọnọdụ.
Mgbe ahụ ajụjụ na-abịa. BIM ezughi oke?
Ikekwe nnukwu ọdịiche n’ihe ihe Digital Twins pụtara bụ na ijikọ ihe niile abụghị naanị ijikọ akụrụngwa. Iche echiche n’uzo njikọ uwa nile putara na ijikọ usoro ndi n’enweghi nkwado ala. Yabụ, anyị bụ ndị nọ n'ọnọdụ ọhụrụ nke mgbasawanye nke onodu, ebe ọdịghị onye ga-anapụ akwụkwọ nke mezuru ma gaa n'ihu na-agbaso usoro BIM, mana ihe dị elu ga-anabata ya ma ọ bụ tinye ya.
Ka anyị hụ ihe atụ:
Mgbe Chrit Lemenn chọrọ iweta Core Cadastre Domain Model maka ọkọlọtọ maka nchịkwa ala, ọ gha ahụ ịchọta nguzozi na ntuziaka INSPIRE na kọmitii teknụzụ nke ụkpụrụ ala. Yabụ, dị ka ya ma ọ bụ na ọ bụghị,
N'ihe banyere INSPIRE, ISO: 19152 bụ ọkọlọtọ maka njikwa cadastral,
Banyere klaasị akwukwo omumu nke LADM, ha aghaghi ime ihe omuma nke OGC TC211.
LADM bụ ọkọlọtọ nke ama ama n'ihe gbasara ala. Ya mere, n’agbanyeghi ụkpụrụ LandInfra tinyere ya, ọ na-emebi ihe dị mfe, ebe ọ kachasị mma ịnwe ọkọlọtọ maka akụrụngwa yana otu maka ala, ma jikọta ha ọnụ ebe mgbanwe nke ozi na-agbakwunye uru.
Yabụ, na onodu nke Digital Twins, BIM nwere ike ịga n'ihu ịbụ usoro nke na-achịkwa ụkpụrụ maka ịme ihe ngosi akụrụngwa; Ọkwa nke 2, N’ime ihe nile d ịakọrị ọnụ n’uche na ihe eji ewu ụlọ. Ma ọrụ na ntinye nke larịị 3, ga - eduga gị n'usoro mgbanwe kachasị mfe maka ijikọ ọnụ site na mgbakwunye uru ọ bụghị whim na a ga-ekwu ihe niile n'otu asụsụ.
Otutu ihe ikwuputa; uru nke data, imebi ihe mgbochi, ihe ọmụma mepere emepe, arụmọrụ nke ihe mgbochi, ọrụ ihe ịga nke ọma, arụmọrụ ...
“Njikọ nke akụrụngwa nwere ọgụgụ isi, ụzọ eji arụ ọgbara ọhụrụ na akụ na ụba dijitalụ na-eweta ohere na-abawanye ugbu a iji melite ogo ndụ ụmụ amaala."
Mannye na-ejide ndị isi na-eme ihe n'azụ nkà ihe ọmụma a, ịghọta mkpa ọhaneze, akụ na ụba, ọha na gburugburu ebe obibi ... ga-enwe nnukwu uru.
Previous Post«Previous FARO ga-egosipụta teknụzụ 3D ya ọhụụ maka geospatial na owuwu na 2020 World Geospatial Forum
Next Post Obodo dijitalụ - otu anyị nwere ike isi jiri teknụzụ dị iche iche dịka ihe SIEMENS na-enyeOsote "